Home News Senetor Xusseen’’Qofkii Baydhabo ku dhinto Farmajo ayaan kula xisaabtameeynaa’’
Senetor Xusseen’’Qofkii Baydhabo ku dhinto Farmajo ayaan kula xisaabtameeynaa’’
Senetor Xuseen Sheikh Maxamuud oo katirsan Xildhibaanada golaha Aqalka Sare ahna Xogayaha gudiga Dastuurkaayaa war uu ku daabacay baraha bulshada ay ku kulanto waxa uu ku sheegay in hal qof hadii uu ku dhinto Baydhabo in lagala xisaabtami doono Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Hal qof hadii uu ku dhinto magaalada Baydhabo ama uu ku dhaawacmo waxaa loo heystaa oo lagula xisaabtami doonaa Madaxweynaha Somaaliya Farmaajo” ayuu yiri Senetor Xuseen Sheikh Max,uud.
Warar kala duwan ayaa laga helayaa xiisada kacsananta ah ee ka dhalatay Afduubka Wadaadka Muqtaar roobow oo ciidamada Militaryga Itoopiya iyo kuwa dowladda ay ka wateen gurigiisa.
Isgaarsiinta Baydhabo ayaa hada ah mid hawada ka maqan, dhanka kale waxaa hakad galay isku socodka dadka iyo gadiidka magaalada caasimada KMG u ah maamulka Koofur galbeed
Previous articleDowladda Federaalka oo sheegtay in ay soo xireen Mukhtar Robow. (Akhriso)
Next article(Deg Deg) Mukhtar Roobow oo dhaawac ah diidayna in la daweeyo